Ku soo dejiso GCAM-ga Galaxy Note 10 oo leh qaab sawir ah oo sawir qaade ah | Androidsis
Qodobkaan waa inaan ku mahadsanid Zoran sameynta GCAM-ka oo qof walba heli karo si buuxda ugu shaqeynaya qaabka Exynos ee Galaxy Note 10 iyo xitaa kamaradda hore. Wax yar oo faneed ah oo aan halkan ku qanacsanahay.
Taasina waa haddii inta Galaxy S9 iyo S10 aysan awoodin inay sameeyaan Adeegsiga qaabka sawirka ee kamaradda hore ee kamaradda Google ama GCAM, Xusuus-qorka 10 waxaan haysannaa dhammaan waxyaabahaas gaarka ah si aan u dhammaystirno xirfad-yaqaanno dhammaan sawirrada aan sameyno. Waxaan ku baran doonnaa, sida fiidiyowga ah, sida looga soo dejisto Zoran kooxdeeda Telegram, iyo tan waddada, kan keliya ee si sharci ah looga soo dejisan karo, iyo sida loo saxo xagga hore oo leh 4 tallaabo Sawirkaas Habka iswada.
1 Sida loo soo dejiyo Zoran GCAM taleefankaaga Galaxy Note 10
2 Sida loo kiciyo faylka qaabeynta DAX3
3 Sida loo hagaajiyo kaamirada hore qaabka sawirka
Sida loo soo dejiyo Zoran GCAM taleefankaaga Galaxy Note 10
Zoran wuu ogolaanayaa ka kooxdaada Telegram ka soo degsashada bilaashka ah noocyada ugu dambeeyay ee si buuxda u shaqeynaya ee GCAM. Taasi waa, haddii aad rabto inaad haysato nooca ugu dambeeya waa inaad gasho kooxda oo aad soo dejiso nooca ugu dambeeya iyo sidoo kale faylasha qaabeynta si aad u ilowdo taabashada dhammaan xuduudaha si aad uhesho sawirrada ugu fiican iyo in kamaradda hore u shaqeyso iyada oo aan midab cagaar lahayn qaabka sawirka.
Midka koowaad: waxaan ku galnay kooxda Zoran Telegram ka soo deg linkigan: https://t.me/ZexynosLounge
Kooxda waxaad ka qori kartaa: # ugu fiican nooca ugu dambeeya ee la heli karo ee Zoran's GCAM
Soo Degso APK
Hada aan yeelno soo dejiso feylka qaabeynta ee aan isticmaali doonno si loo diyaariyo GCAM. Waxaa jira tiro iyaga ka mid ah oo ku xiran barta (waxaad u isticmaali kartaa casharkaan Galaxy-ka kale sida S9, S10 iyo in ka badan, in kastoo kuwani aysan haysan kaamerada hore ee shaqeyneysa)
Waxaan qornaa: # sam10config-dax3
Waxaan ku siin on icon dhibic 3 iyo waxaan dooranay inaan kala soo baxno feylka taleefanka.
Waxaan leenahay diyaar faylka qaabeynta taasina waa waxa noo ogolaanaya inaan yeelano kamaradda hore oo ku shaqeysa qaabka kaamirada. Waad soo dejisan kartaa dadka kale sida ugu badan oo aad tijaabinta u tagi kartaa haddii aad rabto.
Hadda waxaan rakibnaa APK laga soo dejiyay GCAM oo waxaan helnaa feylka qaabeynta.
Sida loo kiciyo faylka qaabeynta DAX3
Tan koowaad waa isticmaal baare faylka inaad leedahay sida shirkadda Samsung oo kale.
Galka galka waxaan abuurnaa galka GCAM
Waxaan galnay GCAM iyo waxaan abuurnaa galka 'CONFIGS'
Waxaan galnaa galkaas iyo waxaan dhajinaa faylkii hore ee la soo dejiyey ee xml, sida inta kale ee aan soo dejinay.
Hadda waxaan fureynaa GCAM iyo wax yar ka hooseeya badhanka badhanka riix laba jeer.
Se daaqad ka fur oo guji qaabeynta oo dooro DAX3
Waxaan riixnaa ee Soo Celinta oo dejimaha ayaa lagu dabaqayaa.
Hagaag hada waxaan diyaar u nahay barnaamijkeena GCAM ee ka socda Zoran. Hadda waxaan hagaajineynaa qaabka hore ee Sawirka Sawirka.
Sida loo hagaajiyo kaamirada hore qaabka sawirka
Waxaan aadeynaa Goobaha oo aan dhigeynaa Isku-darka Denoise ee 100%
Hadda waxaan aadeynaa Settings> Options Advanced> FIX> oo aan badalnaa Kaamiradda Heerka Madoow ee Awoodda leh
Waxaan dib ugu noqoneynaa Settings iyo Isdhaafsiga hore waxaan u dhignay Aqoonsiga 3
Isla shaashadda isla shaashadda ayaan joojinay xulashada «Hagaajinta Habka Kale«
Waxaan dib u bilaabay barnaamijka adoo xiraya oo dib u furaya
Waxaan leenahay wuxuu liis garayaa GCAM shaqeynaya oo leh Sawir Qaade labada kamaradood gadaal iyo horeba. Xusuusnow in aan la joogno nooca 6.1 oo ay wali ku xiran tahay noocyo cusub oo Zoran uu ku sii shaqeynayo hagaajinta.
Khaladka kaliya ee ay hadda leedahay waa xagga hore ee Muuqaalka Sawirka markii in ka badan 1 qof uu ku jiro sawirka. Waxaan rajeyneynaa in shaashadda madow aysan dhowaan soo bixi doonin waana ku raaxeysan karnaa kuwaas sawiro layaableh oo uu qaado 'Zoran's GCAM'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » [APK] GCAM si buuxda u shaqeynaya oo loogu talagalay Galaxy Note 10 (Exynos): xitaa Muuqaalka Sawirka ee sawirada